थाहा पाउनुहोस यसरी भएको रहेछ भगवान रामको मृत्यु : बल्ल खुल्यो यस्तो रहस्य – सुदूरखबर डटकम
थाहा पाउनुहोस यसरी भएको रहेछ भगवान रामको मृत्यु : बल्ल खुल्यो यस्तो रहस्य
रामायणबारे सामान्य जानकारी राख्नेलाई पनि थाहा होला कि भगवान रामको जन्म आधुनिक भारतमा पर्ने अयोध्या शहरका राजा दशरथको घरमा जेष्ठ पुत्रको रुपमा भएको थियो । रामायणका अनुशार भगवान विष्णुले आफ्ना सोह्रै कलाहरू राजा दरशथको घरमा अलग अलग रूपले श्रीराम (१३ कला), लक्ष्मण (२ कला), भरत र शत्रुधन क्रमशः एक एक कलामा विभाजीत गरेर चारवटा पुत्रको रूपमा जन्म लिएका थिए । ती मध्ये सबै भन्दा जेठा श्रीराम जसलाई राम, रघुनाथ, राघव, रघुपति, रामचन्द्र आदी अलग अलग नामले चिनिन्छ ।
मर्यादा पुरुष श्रीराम पितृ बचन मान्नेहरूमा एक हुन् । उनकी माताको नाम कौशल्या थियो । राजा दशरथलाई धेरै दिन सम्म कुनै सन्तान नभएका कारण गुरु बशिष्ठको आज्ञानुशार पुत्रेष्ठी यज्ञा गराएका थिए । त्यसपछी राजा दशरथकी तिनवटी रानीहरूबाट चारवटा छोरा जन्मेका थिए । र रामायणबारे जानकारी राख्नेलाई यो पनि थाहा नहुने कुरै भएन कि भगवन राम १४ वर्ष वनवासमा रहे । र १४ वर्षपछि अयोध्या फर्किए । तर उनको मृत्यु कसरी भयो ? यो विषयका पछाडि भने ठूलो रहस्य लुकेको छ । पद्म पुराणमा उल्लेख गरिएको एक कथाका अनुसार, एक दिन एक वृद्ध सन्त भगवान रामको दरबारमा पुगे । उनले भगवान रामसँग एक्लै वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
त्यसपछि रामले ती सन्तलाई आफ्नो गोप्य कोठामा लगे र ढोकामा आफ्ना भाई लक्ष्मणलाई राखे । सन्तसँगको कुराकानी कसैले भंग गरे उसलाई मृत्युदण्ड दिइने रामले चेतावनी पनि दिए । लक्ष्मणले आफ्ना जेठा भाईको आज्ञा स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कोठमा एक्लै छाडेर आफू ढोकामा पहरा दिन बसे । ती बृद्ध सन्त अरु कोही नभएर विष्णु लोकबाट पठाइएका काल देव थिए । जसलाई यो बताउन पठाइएको थियो कि, भगवान रामको पृथ्वीमा आयू पूरा भइसकेको छ । र अब उनले आफ्नो लोकमा फर्किनु पर्ने छ । दुईजनाबीच कुराकानी चलिरहेको थियो, त्यतिबेलै ढोकामा ऋषि दुर्वासा पनि आए । उनले रामसँग कुरा गर्न चाहेको भन्दै लक्ष्मणबाट भित्र जाने अनुमति मागे ।
तर लक्ष्मणले जेठा भाईको आज्ञा विपरित आफूले त्यस्तो गर्न नदिने बताए । ऋषि दुर्वासा सधैं आफ्नो अत्यन्त क्रोधका कारण चर्चित थिए । उनको क्रोधको सिकार हरकोहीले हुनुपथ्र्यो । यहाँसम्म कि स्वयम् रामको पनि । लक्ष्मणले रोक्न खोज्दा पनि ऋषि दुर्वासा आफ्नो हटबाट पछि हटेनन् । अन्त्यमा उनले लक्ष्मण र राम दुवैजनालाई श्राप दिने चेतावनी दिए । लक्ष्मण द्वीविधामा परे कि अखिरमा आफ्नो भाईको आज्ञा तोड्ने कि उनलाई श्रापबाट बचाउने ? लक्ष्मण चाहँदैन थिए कि उनका कारण उनका भाईलाई कुनै हानी पुगोस् । त्यसपछि उनले एक कठोर फैसला लिए, आफ्नो बलि दिने । लक्ष्मणले सोच कि ऋषि दुर्वासालाई भित्र जान नदिए रामले श्राम लिनु पथ्र्यो । तर यदि लक्ष्मणले आफ्ना भाईको आज्ञाविरुद्ध गए भने उनलाई मृत्युदण्ड मिल्थ्यो । अन्तमा उनले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्ने निर्णय गरे र आफैं कोठाभित्र छिरे ।
त्यसपछि लक्ष्मणलाई मृत्युदण्ड दिन चर्खामा बाँधियो । लक्ष्मणलाई चर्खामा बाँधिएको देखेर राम पनि धर्म संकटमा परे । उनी एकतर्फबाट आफ्नै फैसलाबाट मजबुर थिए भने दोस्रोतर्फबाट भाईको प्रेममा तड्पिँदै थिए । त्यसबेला आफ्नो भाई लक्ष्मणलाई मृत्यु दण्ड पाउनुभन्दा पनि देशभन्दा बाहिर जान भने । त्यसबेला देशनिकालाको सजाय पनि मृत्युदण्ड बराबर नै थियो । तर लक्ष्मण आफ्नो जेठा भाई रामबिना एक क्षण पनि रहन सक्दैन थिए । आखिरमा उनले मृत्युदण्ड नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरे । उनी सरयू नदीको छेउमा गए र संसारबाट मुक्ति पाउने इच्छा जाहेर गर्दै त्यसमा हाम फाले । यसप्रकारले लक्ष्मणको जीवनको अन्त भयो । उनी पृथ्वी लोकबाट दोस्रो लोकमा गए । लक्ष्मण सरयू नदीभित्र गएपछि उनी अनन्त शेषको अवतारमा र विष्णु लोक गए । आफ्नो भाइले संसार छाडेपछि राम धेरै उदास थिए ।
जसप्रकारले रामबिना लक्ष्मण रहन सक्दैन थिए, त्यसै प्रकारले राम पनि लक्ष्मणबिना रहन नसक्ने भए । लक्ष्मणबिना जिउन रामलाई उचित लागेन । उनले पनि पृथ्वी लोक त्याग्ने विचार बनाए । अन्तमा उनले आफनो राज–पाट र पद आफ्ना र आफ्ना भाईका पुत्रहरुलाई सुम्पिदिए । त्यसपछि उनीपनि सरयू नदीतर्फ गए । भगवान राम सरयू नदीको भित्री भागमा पुगे र अचानक गायव भए । त्यसको केही बेरमा सरयू नदीमा भागवान विष्णुको स्वरुप देखियो । यसप्रकारले रामले आफ्नो मानवीय स्वरुप त्यागेर आफ्नो वास्तविक रुप (भगावन विष्णु)को रुप धारण गरे । लोकान्तरको सहयोगमा